Masuuliyadeena Bulsheed ee Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Masuuliyadeena Bulsheed ee Warbaahinta Bulshada
Khamiis, Janaayo 19, 2012 Khamiis, Janaayo 19, 2012 Douglas Karr
Haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, maadaama shirkaddaadu ay billaabeyso inay dhisto wadahadal ku saabsan warbaahinta bulshada ayaa mas'uuliyad kaa saaran tahay. Waxaad masuuliyad ka saaran tahay dhagaystayaashaada iyo shirkadaada inaad ilaaliso tayada wada hadaladaas. Waan necbahay booqashada xarun weyn oo warbaahin ah mana arko wax aan ahayn been, trolls iyo spammers waxay la wareegaan bog. Waxay ii sheegaysaa in codkeyga oo aan ku daro isku darka uu yahay wax qiimo ah si ururka.
Waxaa isbuucaan wareystay Wibc, xarunta wararka maxaliga ah. Mawduuca wadahadalka ayaa ahaa xanta xun in ardaygii IU ee Lauren Spierer meydkiisa la helay. Run ma ahayn, laakiin beentu waxay u faaftay sidii dabkii duurka oo kale.
[maqalka: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2012/01/11812_afternoonnews_netrumorsspreading.mp3 | titles = WIBC Internet Rumoro]
Waa wax laga xumaado in beenta la faafiyo… xitaa in ka badan mararka qaar runta. Haddii shirkaddaadu leedahay baloog leh faallooyin, bogga Facebook, koonto Twitter ama goob kasta oo kale oo loogu talagalay faallooyinka adeegsadaha, waxaad leedahay masuuliyad inaad dhexdhexaad ka dhigto wadahadalka halkaas. Adiga masuuliyad kama saarna shirkaddaada oo keliya, laakiin sidoo kale dhagaystayaashaada.
Jooji oo ka warbixi spam-ka loo diro koontadaada Twitter (ku qor iyaga @samamka). Ha u oggolaan waxyaabaha ku jira been ahaan, waxyeeleeya, ama xoogsheegashada. Iyo ka doodida arrimaha khadka tooska ah ee dantaada ugu fiican ah - sida qof si been ah u dhaleeceeyo shirkaddaada. Rumayso ama ha rumaysan, dadku waxay difaaci doonaan shirkad si xaq ah isu difaacaysa. Iyo, haddii wax kasta oo kale ay dhacaan, dami faallooyinka. Inaad wadahadal la'aato ayaa kafiican inaad siisid xoogaa troller ah qalab dhexdhexaad ah oo dhaawacaya sumcaddaada.
Haddii ay dhacdo Lauren Spierer, waxyeeladu waxay ka weyneyd sumcad shirkadeed. Adiga oo isticmaale u ah baraha bulshada, waxaan rajeynayaa inaad adigu iskaa u qabsato inaad ka hortagto beenta, xanta, ku riixitaanka iyo xoogsheegashada qadka. Dood weyn waa hal shay… laakiin faafinta nacaybka iyo qanacsanaanta waa wax aan midkeenna u dulqaadan karin.
Ogeysiiskii ugu dambeeyay: Ma aaminsani faafreebka dowladda hadalka nacaybka ama wixii lamid ah. Waxaan aaminsanahay in codadkaasi, si kastoo ay karaahiyo u yihiin, ay u baahan yihiin in labadaba la maqlo lana daawado. Laakiin kuma dhici doonto gurigayga mana aha inay ku dhacdo taada.
Tags: wararka xanta ah ee internetkaLauren spiererwararka xanta ah
PIPA / SOPA: Sidee Mawduuc Bilaash ahi Noo Dili Karaa
Delivra Waxay Fureysaa Website Cusub
Markii ugu horeysay halkan, oo aad dareento nasiib!
Waxay u dhacday dhowr qof in qorayaasheyda baloogyadu ay u weerareen si aad u xun oo akhriste xanaaqsan, dhexdhexaadinta wada hadalka ayaa runtii muhiim u ah kiiskan!
Ku dheji Podcast-ka Douglas, waxyaabo fiican!